Home TORO FARANY AFRICAN Emmanuel Adebayor Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Nohavaozina farany teo March 6, 2019
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny mpikomy mafy indrindra izay fantatry ny anarany manokana; "Rosemary". Ny tantaram-pitiavantsika Emmanuel Adebayor tantaram-piainana mihoatra ny zava-misy momba ny tantaram-piainana dia mitondra fitantarana feno momba ny zava-mitranga hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny fanadihadihana dia ny tantaram-piainany talohan'ny laza, ny fifandraisana amin'ny fiainana, ny olana momba ny fianakaviana ary ny zavatra hafa tsy fantatra momba azy momba ny OFF sy ON-Pitch.
Eny, samy mahafantatra ny fahaiza-manaony avokoa ny rehetra saingy marobe kosa no mandinika ny tantaran'i Emmanuel Adebayor izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao, raha tsy misy adieu, dia aoka isika hanomboka.
Emmanuel Adebayor tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana misongadina -Voalohandohan'ny fiainana
Emmanuel Adebayor dia teraka tamin'ny andro 26 tamin'ny 1984 Febroary tany Lome, Togo. Teraka tao amin'ny rainy, Shadrach Adebayo Adeyi sy ny reniny, Hajia Adebayor.
Adebayor dia tsy afaka nandeha nandritra ny efatra taona voalohany tamin'ny fiainany. Niady saina ny reniny noho ny fitondrany Adebayor mahantra manodidina an'i Afrika Andrefana amin'ny fikarakarana fanafody ho an'ny tongony izay hita.
Avy eo i Adebayor dia niresaka momba ny 'fahagagana' nataony, "... Tao amin'ny fiangonana niorina aho, ary teo amin'ny sivy na folo ora teo Alahady maraina, naheno ankizy nilalao tany ivelany aho. Tampoka teo dia nisy olona nandoaka baolina tao amin'ny fiangonana. Ary ny olona voalohany nitsangana sy nihazakazaka me becaampiasao aho te-hahazo an'io baolina io. Tamin'izany no nahitako ny fahagagako. Andro iray nahafantarako fa nanendry ahy ho mpilalao baolina i God "
Nalefan'i Adebayor tao amin'ny OC Agaza ao an-toerana ao Togo izay toerana nahalehibeany ny laharana. Nahita an'i Metz Scout, Francis De Taddeo izy nandritra ny fifaninanana tanora iray ary nentina tany Frantsa. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Emmanuel Adebayor tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana misongadina -Relationship Life
Mpandroba Togolese sy Tottenham Hotspur Emmanuel Adebayor dia mitazona ny fiainany tsy miankina matetika, ary tsy dia fantatra loatra momba ny vadiny Charity Adebayor. Izy irery ihany no manatrika hetsika goavana amin'ny ankamaroany any Eorôpa miaraka aminy.
Emmanuel Adebayor sy ny vadiny, fiantrana
Adebayor sy ny fiantrana dia manana zanakavavy izay nantsoiny hoe Kendra Adebayor. Teraka tamin'ny Jona 2010 izy.
Ray aman-dreny - Emmanuel sy Kendra
Emmanuel Adebayor sy ny zanany vavy, Kendra dia manintona amin'ny sary etsy ambany.
Ny adebayor sy ny zanaka vavy dia afaka maka sary
Kendra tao amin'ny 2013 dia nankalaza ny fahatelo tamin'ny nahaterahany tamin'ny fomba lehibe. Ny ray aman-dreniny dia tsy maintsy nanangana ny antoko tsara indrindra ho azy.
Emmanuel Adebayor tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana misongadina -Family
Ny dadan'i Adebayor dia miala amin'ny tanàna kely iray antsoina hoe Igbaye ao amin'ny Governemanta Local Odo Otin
Foiben'i Osun State, Nizeria. Ny rainy Shadrack Adebayor Adeyi dia maty tao amin'ny 2005, namela ny reniny, Hajia Adebayor. Ny reniny dia avy amin'ny tanàna manodidina antsoina hoe Ekusa.
Manana rahalahy telo sy rahavavy telo i Emmanuel. Manakaiky ny iray amin'ireo anabaviny izy, Iyabo. Ny anaran'ny zandriny lahy dia Rotimi Adebayor. Ireo rahavavy roa sisa dia Lucia Adebayor (rahavavy), Maggie Adebayor (rahavavy). Peter Adebayor no rahalahiny teraka.
Emmanuel Adebayor tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana misongadina -Fianakaviana
Mpikatroka Adebayor vao haingana no nanoratra lahatsoratra lava sy voatatitra ao amin'ny pejiny Facebook manokana mba hampisehoana ny alahelony manokana sy ny korontana ara-pianakaviana izay niainany tamin'ny lasa, ary nanambara ny fiantraikan'ny fianakaviany hanararaotra azy.
Ny lahatsoratra lava eo amin'ny vahoaka Facebook pejy namariparitra ny olana mianjady amin'ny fianakaviany.
Nanoratra tao amin'ny pejiny Facebook izy: "Ranomasina, Efa ela aho no nitazona ireny tantara ireny saingy heveriko fa mendrika ny hizara amin'ny sasany amin'izy ireo ny androany. Raha ny marina, ny olana ara-pianakaviana dia tokony hamaha ny ao an-trano ary tsy eo imasom-bahoaka fa manao izany aho mba hanantena ny fianakaviana rehetra hianatra amin'ny zava-nitranga tao amiko. koa, tadidio fa tsy misy resaka vola izany.
Tamin'ny taona 17, niaraka tamin'ny karama voalohany nataoko ho mpilalao baolina kitra, nanangana trano ho an'ny fianakaviako aho ary nanamafy fa azo antoka izy ireo. Araka ny efa fantatrareo rehetra, nahazo ny tropiman'ny African Player of the Year aho tamin'ny 2008.
Nentiko niaraka tamiko koa ny reniko mba hisaotra azy noho ny zava-drehetra. Tamin'io taona io ihany, nentiko tany Londres ho an'ny fahasalamana isan-karazany izy jereo-dehibe.
WheNateraka ny zanako vavy, nifandray tamin'ny mamanay izahay mba hampahafantatra azy saingy nanantona ny telefaona avy hatrany izy ary tsy te hahafantatra izany. Ny famakiana ireo fanehoanao farany, nisy olona sasany nilaza fa izaho sy ny fianakaviako dia tokony hijery an'i TB Joshua. Tao amin'ny 2013, nanome ny volan'ny reniko aho mba hahafahako manontany azy any Nizeria. Tokony hijanona mandritra ny herinandro 1 izy; Fa andro 2 tao amin'ny fijanonany, nahazo antso aho milaza fa niala. Ankoatr'izany rehetra izany dia nanome vola be ho an'ny reniko koa aho mba hanombohana orinasa sy kojakoja samihafa. Mazava ho azy, navelako izy ireo hametraka ny anarako sy ny sary ho azy ireo mba hahafahany mivarotra bebe kokoa. Inona koa no azon'ny zanakalahy atao mba hanohanana ny fianakaviany?
Roa taona lasa izay, nividy trano aho tany East Lagon (Ghana) ho an'ny $ 1.2 tapitrisa. Hitako fa ara-dalàna ny mamela ny zokiko vavy, Yabo Adebayor mijanona ao amin'io trano io. Navelako ihany koa anadahy tsy iray ray (Daniela) mba hijanona ao amin'io trano io ihany. Volana vitsivitsy taty aoriana dia efa nanao vakansy aho ary nanapa-kevitra ny handeha ho any amin'io trano io. To Gaga aho fa nahita fiara maromaro teny an-dalana. Raha ny marina, nanapa-kevitra ny hividy trano aho raha tsy fantatro. Nesorin'i Daniel tao amin'ilay trano koa izy. Mariho fa nanodidina ny efitrano 15 ny trano. Rehefa nantsoiko izy ary nangataka iray fanazavana, nalainy nandritra ny minitra 30 ny fanararaotam-pahefana ary nanompa ahy tamin'ny finday. Nantsoiko ny reniko hanazava tNiatrika toe-javatra izy ary nanao tahaka ny rahavaviko. Ity anabavy ity ihany no milaza fa tsy manaiky aho. Anontanio azy ny momba ny fiara mitondra fiara na izay zavatra amidiny anio?
Ny rahalahiko Kola Adebayor, dia efa tany Alemana nandritra ny taona 25. Nody an-tanindrazana izy tamin'ny fotoana 4, noho ny fandanilanako. Manarona tanteraka ny saran'ny fianaran'ny zanany aho. Rehefa tonga tany Monaco aho, dia nanatona ahy izy ary nangataka vola mba hanombohana raharaham-barotra. Andriamanitra irery ihany no mahalala ny habetsahan'izay nomeko azy. Aiza izao raharaham-barotra izao?
Rehefa nodimandry i Peter zandriny dia nandefasako vola be i Kola mba hahafahany miverina mody any an-trano. Tsy nanatrika ny fandevenana mihitsy izy. Ary amin'izao andro izao io rahalahy io (Kola) dia miteny amin'ny olona fa izaho dia tafiditra ao amin'ny fahafatesan'i Petera. Ahoana? Izy ihany ilay rahalahy izay nandeha ary nilaza tantara tsy marina mikasika ny fianakavianay ho "The Sun" amin'ny hafa handray vola. Nandefa taratasy ihany koa ry zareo ho any amin'ny Club misy ahy fony aho tany Madrid ka azoko nesorina.
Raha tany Monaco aho dia nihevitra fa tsara ho an'ny fianakavian'ny mpilalao baolina kitra. Nataoko àry fa tonga amin'ny akademia baolina kitra any Frantsa i Rotimi rahalahiko. Tao anatin'ny volana vitsivitsy; avy amin'ny mpilalao 27, nangalatra ny finday 21 izy.
Tsy hilaza zavatra momba an'i Peter Adebayor rahalahiko aho satria tsy eto izy anio. Aoka hitoetra ao am-pony ny fiadanany.
Ny anabaviko Lucia Adebayor dia mitazona amboarae fa nilaza ny raiko hitondra azy any Eorôpa. Fa inona no antony hanosika azy Eoropa? EveryonEto dia misy antony.
Tao Ghana aho rehefa naharay ny vaovao momba ny marary mafy nataon'i Peter. Nentiko haingana aho tany Togo mba hihaona aminy sy hanampy azy. Rehefa tonga aho dia nilaza ny reniko fa tsy nahita azy aho ary tokony hanome ny vola fotsiny aho ary hamaha ny zavatra rehetra izy. Andriamanitra irery ihany no mahalala ny habetsaky ny nomeko azy. Milaza ny olona fa tsy nanao na inona na inona aho hamonjena an'i Peter rahalahiko. Adala ve aho handroaka ora 2 ho any Togo?
Nanomana fivoriana iray tao amin'ny 2005 aho hamaha ny olan'ny fianakaviako. Rehefa nanontany azy ireo mikasika ny hevitr'izy ireo aho, dia nilaza izy ireo fa tokony hanangana trano iray ho an'ny mpianakavy tsirairay aho ary hanome ny karama isam-bolana ho azy ireo.
Androany dia mbola velona aho ary efa nizara ny entako rehetra izy ireo, raha ny marina dia maty aho.
Noho ireo antony rehetra ireo, dia naharitra ela tokoa ny nananganana ny fototra iorenako teto Afrika. Isaky ny miezaka manampy ny olona sahirana aho dia tsy maintsy manontany ahy izy ireo ary mihevitra izy ireo fa hevitra ratsy izany.
Raha manoratra ity aho, ny tanjona fototra dia ny tsy mamelatra ny fianakaviako. Te-hianatra fotsiny avy amin'ny fianakaviana Afrikana hafa aho. Misaotra anao."
Emmanuel Adebayor tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana misongadina -toetra
Emmanuel Adebayor dia manana ny toetrany amin'ny toetrany.
hery: Adebayor dia fangoraham-po, saina, saina ary hendry.
fahalemena: Adebayor dia matoky tanteraka.
Inona no tian'i Adebayor: Sleeping, mozika, tantaram-pitiavana, fampitam-baovao, sary milomano sy ara-panahy
Adebayor tsy tian'ny sasany: Fantaro-ny olona rehetra, voatsikera, ny lasa niverina hangeja azy sy ny halozàna rehetra.
Amin'ny ankapobeny, Adebayor dia tsy tia tena ary vonona ny hanampy ny hafa foana, ary tsy manantena ny hahazo zavatra hiverina.
Emmanuel Adebayor tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana misongadina -Ny tantara Juju
Ny vaovao lehibe avy amin'ny haino aman-jery Britanika dia mampiseho an'i Adebayo manafoana ny reniny Alice, ary miampanga azy amin'ny karazana mpilalao saribakoly izay nisy fiantraikany tamin'ny fahombiazany.
Gaga be ity tontolo ity fa tsy menatra ity lehilahy ity izay nilalao ho an'i Arsenal, Manchester City, Real Madrid ary Tottenham amin'izao fotoana izao ary izay mandeha amin'ny vanim-potoany, dia tokony hianjera amin'ny toerany. Saingy nino azy ireo ny reniny fa tompon'andraikitra ny reniny. Ary niampanga azy ampahibemaso izy. Nanana tanjona roa izy tao amin'ny fivoaran'ny 12 ho an'i Tottenham alohan'ny nanazavàny ny fiampangany.
Ny rahalahiko dia efa voasasan'ny atidoha -Kola Adebayo, hoy ny rahalahiny, tao amin'ny 2015. Kola, 42, mpitondra mpamily fiara iray any Alemaina, dia tsy maintsy niresaka tamin'ny fampahalalam-baovao tany Eorôpa mba hanenenana fa efa nanasa ny atidohan'i Emmanuel i Emmanuel "Muslim alfas izay nilaza taminy fa ny reniko dia ao ambadiky ny tsy fahafahany mamono tanjona." Nilaza i Kola fa manafintohina izany hoe nino azy i Emmanuel. Ary noho ny adebayo miezaka ny hiverina amin'ny endrika dia namela ny tenany ho tototry ny tahotra mpilalao sarimihetsika.
Nitohy izy ...Adebayo dia mbola tsy nilalao akory aza, ary inona no tanjona kokoa. Be zotom-po kokoa izy noho ny ady ara-jeôgrafia noho ny fiezahana hiverina hanamboatra sy haka ny toerany. Ary ny ady amin'ireo fanahy ireo dia mandoa vola aminy.
Emmanuel Adebayor tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana misongadina -Africa Best Player
Ilay mpanafika manana fanomezam-boninahitra dia antsoina hoe mpilalao Afrikana ho an'ny 2008 amin'ny fankalazana ny lokan'ny Confederation of African Football (CAF). Adebayor dia namono ireo kandidà Mohamed Aboutrika avy any Ejipta sy i Michael Essien ao Ghana tamin'ny fifidianana izay nahita ny mpanazatra ekipa nasionalin'ny mpikambana ao amin'ny 54 mpikambana ao amin'ny CAF hifidy.
Adebayor mandray ny African Top Player Award ho an'ny 2008
Niaraka tamin'ny reniny izy tamin'ny lanonana fankalazana, izay nahazoany trophy kristiana sy loka $ 20,000. Izy no mpilalao Togolese voalohany nekena ho mpilalao mahay ao Afrika.
Emmanuel Adebayor tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana misongadina -Karazana karazana
Izy no mpilalao sarobidy indrindra teto Afrika. Manana vola be ao an-tanany izy, manao izay vitany. Mividy fiara lafo vidy toy ny hita etsy ambany.
Emmanuel Adebayor tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana misongadina -Alefaso ny famoahana ny findainy
Adebayor dia mety ho voavaha sy malemy. Indray mandeha izy dia tonga tamin'ny fandrakofan'ny BBC momba ny lalao baolina kitra Japoney vs Kamerona nefa tsy nahatsiaro ny nanakatona na nametraka ny findainy nangina raha mbola teny an-danitra.
Emmanuel Adebayor tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana misongadina -Team Bus fanafihana
Tamin'ny Janoary 2010, Adebayor dia iray tamin'ireo mpandray anjara voakasika rehefa nipoaka ny fiara mpitatitra ny ekipan'i Togo teny amin'ny làlana mankany amin'ny Fiadiana ny Amboara Amerikana 2010 any Angola.
Nolazain'i Adebayor fotoana nitomaniana taorian'ny niafarany ny fanafihana mpampihorohoro tany Angola nandritra ny fitetezana ny Fiadiana ny Amboara Amerikana 2010 Africa. Nianjera ilay mpamily ary nisy mpikambana iray tao amin'ny ekipa nasionalin'ny baolina kitra tao Togo ary enina hafa naratra mafy. Soa ihany fa velona i Adebayor.
Tao amin'ny 2013, Adebayor dia niverina tany amin'ny ekipan'i Togo ho an'ny firenena Afrikana 2013 Afrikana any Afrika Atsimo, izay nanampy azy ireo hahafeno ny fe-final. Izy no tarika mpitahiry malaza rehetra ao Togo amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny tanjona 31.
Emmanuel Adebayor tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana misongadina -Mpanome
Adebayor dia mpanome fanampiana matanjaka ny tanindrazany any Afrika. Ity ambany ity ny sarin'ilay izy nandoa vola tamin'ny fiarahamonina.
FACT CHECK: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i Emmanuel Adebayor momba ny tantaram-piainana sy ny zava-misy tsy fantatra. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.
Teko Benjamin Novambra 18, 2018 Ao amin'ny 9: 03 am
Ity tontolo ity dia tsotra nefa mampidi-doza satria isika olombelona no lany. na manao ny tsara na ratsy ianao dia ho voatsikera, arovy ny entanao. Notahina ianao